Umnyango uyamisa intshayelelo
A ucango yeka (nayo ukumiswa emnyango, ukuma emnyango okanye umnyango wedge) sisixhobo okanye isixhobo esisetyenziselwa ukugcina ucango luvulekile okanye luvaliwe, okanye ukuthintela ucango ekuvulekeni ngokubanzi. Eli gama linye lisetyenziselwa ukubhekisa kwisilayiti esibhityileyo esakhiwe ngaphakathi kwisakhelo somnyango ukukhusela ucango ukuba lungajiki xa luvaliwe. Istopstop (esetyenzisiweyo) inokuba sisibiyeli esincinci okanye isiqwenga sesinyithi esenziwe kwisakhelo somnyango sokumisa umnyango ekujikeni (kwicala elibi) kunye nokuguqula loo mnyango uye kwicala elinye (in-swing Push okanye ukukhupha ngaphandle)Ukubamba iingcango zivulekile
Umnyango unokumiswa ngumphezulu wento into enzima nje enzima, enje ngerabha, ebekwe ecaleni komnyango. Ezi ndawo zokuma ziye zaphuculwa ikakhulu.
 Ngokwembali, izitena ezikhokelayo bezikhethwayo xa zikhona.
[2 Nangona kunjalo, njengoko ityhefu yobunkokeli ibonakalisiwe, olu setyenziso luyekisiwe ngamandla.
 Enye indlela kukusebenzisa i ukuma emnyangooludaka oluncinci lomthi, irabha, ilaphu, iplastiki, umqhaphu okanye enye into. Iidges ezenziwe ngezi zinto zihlala zifumaneka. I-wedge ikhatywa ibekwe endaweni kwaye amandla ezantsi omnyango, ngoku axineneyo anyuka esiya emnyango, unika ukungqubana okwaneleyo ukuze kungagungqi.
 Icebo lesithathu kukuxhobisa umnyango ngokwawo ngesixhobo sokumisa. Kule meko, ibha yesinyithi emfutshane egqunywe ngerabha, okanye enye into exubeneyo, incanyathiselwe kwihenjisi kufutshane emazantsi omnyango ejongene nehenjisi yomnyango nakwicala lomnyango kwicala elivalekileyo. Xa ucango luza kugcinwa luvulekile, ibar iyawiswa phantsi ukuze isiphelo serabha sichukumise umgangatho. Kolu luqwalaselo, ukuqhubela phambili kocango ukuya ekuvaleni kwandisa amandla kwisiphelo serabha, ngaloo ndlela kunyusa amandla omlo ophikisana nentshukumo. Xa ucango luza kuvalwa, isitopu siyakhululwa ngokutyhala ucango luvuleke kancinci, ukhupha istopu kwaye uluvumele ukuba luguqulwe luye phezulu. Inguqulelo entsha yokuxhobisa ucango ngesixhobo sokumisa kukuncamathisela umazibuthe emazantsi omnyango kwicala elivula ngaphandle elincamathele komnye umazibuthe okanye izinto zemagnethi eludongeni okanye ihabhu encinci emgangathweni. Imagnethi kufuneka yomelele ngokwaneleyo ukuba ingabamba ubunzima bomnyango, kodwa ibuthathaka ngokwaneleyo ukuba ingaqhagamshelwa ngokulula eludongeni okanye kwihabhu
Ukuthintela umonakalo ngeengcango
Olunye uhlobo lokumisa emnyango lusetyenziselwa ukukhusela iingcango ekuvulekeni kude kwaye zonakalise iindonga ezikufutshane. Kule meko isilinda yerabha okanye idome - okanye intonga okanye ibhloko yentsimbi encanyathiselwe ngerabha, ukhuni okanye iplastikhi- iyajijwa eludongeni, ekubunjweni okanye kumgangatho osemnyango. Ukuba iqhotyoshelwe eludongeni, inokuba ziisentimitha ezimbalwa ngaphezulu komhlaba, okanye kubude obufana nokudibana neqhosha lomnyango. Isango elincinanana, elincanyathiselwe eludongeni, ngesiqhelo irabha yedome okanye isilinda, ngamanye amaxesha kuthiwa ludonga oludongeni.
Ngamaxesha athile, kuye kumiswe iindawo zokumisa ezilungiselelwe embindini womnyango, njengenxalenye yehenjisi yomnyango esembindini. Iindawo zokumisa ezinjalo zaziwa njenge "hinge stops" okanye "pin hinge" emnyango kwaye zihlala zisetyenziselwa ukunqanda ukonakala kubumbeko lwebhodi.